Mbola mitohy ny olana amin'ny Web 3.0
Alatsinainy, 18 Jona, 2018 Zoma, Aprily 23, 2021 Douglas Karr
Fanasokajiana, sivana, fanoratana, fanangonana, fangatahana, fanoratana, fanoratana, fanoratana, fanasongadinana, tamba-jotra, fanarahana, fanangonana, faniriana, bitsika, fikarohana, fizarana, fanoratam-boky, fangadiana, fahatafintohinana, fanasoketana, fampidirana, fanarahana, famaritana… tena maharary tokoa. The Evolutions of the Web Web 0: Tamin'ny 1989, Tim Berners-Lee avy amin'ny CERN dia nanolotra Internet misokatra. Ny tranonkala voalohany dia niseho tamin'ny 1991 niaraka tamin'ny World Wide Web Project. Web 1.0: Tamin'ny taona 1999 dia misy tranokala 3 tapitrisa ary ireo mpampiasa dia mivezivezy amin'ny alàlan'ny lahateny am-bava sy lahatahiry toa ny Yahoo! Malagasy
Mba hametrahana, handrefesana ary hanatsara ny fanovana rehetra hanatsarana ny valin'ny ecommerce anao, dia zava-dehibe ny fakana ny angon-drakitra mifandraika amin'ny mpampiasa sy ny hetsika rehetra. Tsy afaka manatsara izay tsy refesinao. Mbola ratsy kokoa aza, raha mametra ny zavatra refesinao ianao, dia afaka mandray fanapahan-kevitra manimba ny varotrao amin'ny Internet. Araka ny lazain'ny Softcrylic, mpilalao Data & Analytics tsy miandany mpivarotra, ny fitantanana ny tag dia manompo ny Digital Marketers 'miaraka amin'ny fahitana lavitra momba ny fanarahan-dia ny mpitsidika, ny fikendrena ny fitondran-tena, ny fanamarihana manokana, ny fanamafisana ary ny fanamafisana ny angona.
BrightTag: Sehatra fitantanana orinasa tag
Alakamisy Oktobra Oktobra 31, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Olana roa izay miady tsy tapaka amin'ny Internet ireo matihanina amin'ny marketing dia ny fahafahana mampihena ny fotoana lanin'ny tranokalany ARY ny fahaizana mametraka safidy fanampiny momba ny marika amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny orinasam-pandraharahana mahazatra dia mety manana fandaharam-potoana fametrahana izay maharitra herinandro na volana maromaro mihitsy aza mba hanovana ny tranokala. Ny iray amin'ireo mpanjifan'ny orinasanay dia nanakambana ny fitantanana tag an'ny orinasa BrightTag ao amin'ny tranonkalany miaraka amin'ny valiny mahavariana. Ny tranokalan'izy ireo dia nihazakazaka famakafakana marobe